ကလေးများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေယဉ်ကျေးမှု - 'မင်းကဟုတ်ကဲ့လို့မပြောခင်ကလေးတွေကမင်းကိုနေ့တိုင်းမေးလိမ့်မယ်' - Your Brain On Porn
ကလေးများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေယဉ်ကျေးမှု - 'မင်းကဟုတ်တယ်မပြောမချင်းယောက်ျားတွေကမင်းကိုနေ့တိုင်းမေးလိမ့်မယ်'
13 နှစ်အရွယ် Chevonea Kendall-Bryan အဖျားစေးရန်ငယ်ရွယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမောင်းနှင်ထားပြီး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအကြောင်းအဘယ်သို့ပြုလိမ့်မည်နည်း၏အသေခံခြင်း
စွဲ: တဦးတည်းဆရာအချို့ကျောင်းသား porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲအိပ်ပျော်ခြင်းမှမရနိုင်တော့ဟုဆိုသည်
လာမယ့်မုန်တိုင်းရှိပါသည်။ ငါတောင်ဘက်လန်ဒန်မြို့ရှိလမ်းတစ်လမ်းထောင့်ပေါ်မှာရပ်သကဲ့သို့ငါငါ့သမီးတို့စဉ်းစားပါကခံစားရနိုင်ပါတယ်။ လီလီနှင့်နှင်းဆီနှစ်ဦးစလုံး 11 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုမှာခွေး, အခြားမေတ္တာမြည်အကြောင်းကိုအရူးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဟော်မုန်းနှိုးဆော်ရန်စတင်သောအခါသူတို့ကနူးညံ့သောနှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ပြင်းထန်သောဆယ်ကျော်သက်များကဲ့သို့အခန်းပတ်ပတ်လည်တစ်မိနစ် stomping ပေမယ့်လာမယ့်တစ်ဦး cuddle တက်သည် snuggling နိုငျသညျ။
အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်အစာရှောင်ခြင်း 13 သူမကဒီလမ်းပေါ်မှာတိုက်ခန်းတစ်ဘလောက်၏စတုတ္ထကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြတင်းပေါက်ထဲကတစ်ခုထဲကထောက်သောအခါ Chevonea Kendall-Bryan သောအသက်အရွယ်ချဉ်းကပ်နေကြသည်။ သူမသိသည်တစ်ဦးကကောင်လေးမြေပြင်ပေါ်တွင်ကဒီမှာချခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ Romeo နဲ့ Juliet မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဝေးကနေ။
Chevonea သူ့ကိုအပေါ်တစ်ဦးလိင်အပြုအမူဖျော်ဖြေသို့ဖိအားခဲ့လျှင်, သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူဒါလုပ်နေတာသူမ၏တစ်ဦးကိုဖုန်းကလစ် shared ခဲ့သည်။ သူမသည်သူက delete မပြုခဲ့ပါလျှင်ပြတင်းပေါက်ထဲကနေခုန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမအကြီးအကျယ်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကနေသေဆုံး, မြေဖို့ 60 ခွကေိုချော်နှင့်လဲကျသွားသည်။
သူမ၏မိခင်သူမကယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များဖို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆန့်ကျင်စည်းရုံးရေးလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူတို့ဟာပိုမိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများနှင့် ပို. လင်းလင်းရည်ညွှန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၎င်းတို့၏မိဘများသိတယ်ဘာမှထက်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရှိခြင်း, အစွန်းရောက်ဖိအားအောက်မှာဆက်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။
"ဘယ်တော့မှမမတိုင်မီ girlhood ထိုကဲ့သို့သောစဉ်ဆက်မပြတ်ချေမှုန်းရေးအောက်မှာခဲ့ - ကြော်ငြာတွေ, အရက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, မိန်းကလေးများ '' မဂ္ဂဇင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတီဗီအစီအစဉ်များနှင့်ပုံမှန်ဤမျှလောက်များစွာသောဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာဝင်ရောက်သောခက်ခဲညစ်ညမ်းထံမှ" ဟုစိတ်ပညာရှင်စတိဗ် Biddulph လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှကပြောပါတယ် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမိန်းကလေးများလို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်မြှင့်တင်ရန်တိုင်းပြည်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး-ရောင်းချသူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း Boys တစ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည် - သူတို့အရမ်းဖိအားအောက်မှာရှိပါတယ်, မိန်းကလေးများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြယ်များကဲ့သို့အကငျြ့ပါမညျကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်ခံရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ pornification ၏သားကောင်များဖြစ်လာရသည်။
"ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အချို့တော်တော်လေးစော်ကားသောပစ္စည်းပစ္စယများလက်ခံရရှိအဆုံးပေါ်နေသောမိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်" ဟုဖွင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝများ၏စီးပွားဖြစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ရဲ့အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပြီးခဲ့သူကို Claire ပယ်ရီအမတ်ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့ Boob အပေါ်၎င်းတို့၏အမည်များကိုရေးနှင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ဖို့တောင်းခံရငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များရရှိပါသည်။ မိဘများကဒီတိုင်းပြည်အတွက်တော်တော်များများတိုင်းကျောင်းကဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသိရန်တကယ်ကိုအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများဟာအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျထကြီးထွားလာနေကြတယ်။ "
ဒါကြောင့်ဒီကိုငါ့မိန်းကလေးငယ်များမကြာမီရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါထားပြီးသတင်းများကဖော်ပြခဲ့ကြသည်ကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ သူတို့ရဲ့ဘို့အလိုငှါ, ငါသိ၏ချင်ပါကပုံကိုမကောင်းတဲ့ပါသလဲ ဘယ်လိုကျယ်ပြန့်? ကျွန်မမစ္စပယ်ရီမှပြောဆိုရန်မေးမြန်းပါ, ငါငါကအမှန်ပင်အလွန်ဆိုးရွားဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုပေးသောကလေးများမှရက်စက်မှုများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေး, များအတွက်အမျိုးသားလူ့အဖွဲ့အစည်းကအစီရင်ခံစာဖတ်ပါပြန်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းတယ်နေစဉ်။ 2010 နှစ်ခုလန်ဒန်ကျောင်းများမှာကျောင်းသားဘဝတစ်ဦး In-depth ကိုလေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်သူကိုသုတေသီများသူတို့ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတောင်းဆိုချက်များအားဖြင့်လွှမ်းခံစားရရန်စတင်သောအခါအတစ်နှစ်ရှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
12 သို့မဟုတ် 13 ဖြစ်ရမည်သူကိုကို Claire, သူမ၏အတန်းအစားထဲမှာယောက်ျားလေး၏ဟုအဖြစ်ကိုးကားနေသည်: "သူတို့ပါးစပ်လိင်လိုလျှင်သင်ဟုတ်ကဲ့ပြောမှီတိုင်အောင်, သူတို့ကနေ့တိုင်းမမေးပါလိမ့်မယ်။ "
Kamal, ထိုနှစ်ထဲမှာယောက်ျားလေး, says: "ငါရည်းစားရတယ်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ငါသည်သူမ၏ရင်သားအပေါ်မှာငါ့နာမကိုအမှီရေးသားဖို့သူမကိုမေးပါ, ပြီးတော့ငါ့ထံသို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်မ Facebook သို့မဟုတ် Bebo သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကပေါ် upload တင်မယ်လို့မယ်လို့ ။ "ဟုသူကမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပေးတော်မူသောလူတိုင်းမြင်သည်သူ၏ဖုန်းပေါ်မှာအဆိုပါပရိုဖိုင်းပုံတစ်ပုံ, သူ့ရည်းစားရဲ့ cleavage ၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအကျောင်းမှမှာယောက်ျားလေး၏အချို့ဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများ 30 မှတက်၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေရှိသည်။ ကျွန်တော်ဘောလုံးကတ်များဖလှယ်ဖို့အသုံးပြုတူသောသူတို့ဖလှယ်။ သူတို့တစ်တွေမိန်းကလေးအရိုးစုကိုဆိုရင်သူတို့ကသူမ၏သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ၏ရုပ်ပုံပေးပို့ပါ။ တဦးတည်းဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အစီရင်ခံစာထွက်လာသပြီးနောက်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ခြင်း "သစ်ကိုပရောပ" ဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောသည်။
Chloe Combi "ဟုတော်တော်လေး posh ကျောင်းတွင်" တွင်သူမ၏စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးကိုယခင်ဆရာကနောက်ထပ်ဝင်သောအခါအ ပတ်သက်. Times ကပညာရေးဆိုင်ရာဖြည့်စွက်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထားပါတယ်: "အစဉ်အမြဲငါဖူးအဆိုပါအခက်ခဲဆုံးစကားပြောဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး 45 တစ်အိမ်တွေကိုသွားပြီး, ရှုပ်ထွေးသည်လူနှင့်အတူရှိ၏ ။ ကျနော်တို့သူမကငွေသားများအတွက်ယောက်ျားလေးများ '' အိမ်သာထဲမှာလုလင်တစ်ဦးလိုင်းကို fellatio စီမံခန့်ခွဲဖမ်းမိခဲ့သောကွောငျ့ကြောငျးမှမိမိအထင်ရသော Non-နှိပ်စက်, Non-နှောင့်အယှက်ကောင်းစွာ-ကိုချစ်၏သမီးဖယ်ထုတ်ခဲ့သောသူ၏ရှင်းပြခဲ့ရတယ်။ "
မစ္စ Combi သွား. : "အခြားကျောင်းတွင်သွန်သင်သူကိုသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်, (ပိုပြီး posh သတ္တုတွင်းထက်) ကသူတို့အလားတူဖြစ်ရပ်မှကာကွယ်ရန်တိုင်းတွင်နေ့လည်စာကင်းလှည့်သွားခဲ့ရသည်ဒါမကောင်းတဲ့တယ်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ "
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုများ၏အကြောင်းရင်းကဘာလဲ? ကျနော်တို့ကပိုသုတေသနလိုအပ်တယ်, အကျွမ်းကျင်သူများကဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်မိဘမှ, တကအကြီးအကျယ်စမ်းသပ်မှု၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရလဒ်နှင့်တူပုံရသည်။ အင်တာနက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအမာခံညစ်ညမ်းမှအခမဲ့, ပတ်ပတ်လည်-The-နာရီ access ကိုအတူတက်ကြီးထွားဖို့ပထမဦးဆုံးသားဖြစ်ကြ၏။ porn ကြော်ငြာကနေ Grey ကငါးဆယ် Shades တူသောရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေမှအရာအားလုံးကို coloring သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၏သင်တန်းငါတို့သားသမီးထိခိုက်နေကြသည်။
ဒိုင်ယန်းအာဘော့, အရိပ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က said: "ငါ fast- အားဖြင့်ဗြိတိန်မိသားစုများ၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ထားထားပြီးဖြစ်သောလျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်, ဗြိတိန်ကျောင်းများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း striptease ယဉ်ကျေးမှု၏မြင့်တက်ယုံကြည်သောအရာကိုမီးမောင်းထိုးပြချင် နည်းပညာ, နှင့်တစ်ဦးပိုမို pornified ဗြိတိန်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ "
ဒါဟာ Playboy ယုန်လိုဂိုနဲ့သူတို့ပဲချွတ်ပူးတွဲမှာပြောင်းကုန်ပြီပြီးဆုံးပါပြီတူကြောင်း Bratz ရုပ်သယ်ဆောင်ကြောင်းခဲတံဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူလူငယ်စတင်သည်။ high-ဒေါက်ဖိနပ်တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအပေါ် saucy အသံဖို့ရည်ရွယ်လိမ့်မယ်လို့ကြွေးကြော်သံဆောင်သော knickers အတူအသက်ရှစ်နှစ်မှာမိန်းကလေးများထံရောင်းချနေကြသည်။ လူသစ်တွေကိုထုတ်တွန်းနေကြသည်သည်အထိ Mumsnet တူသောစိုးရိမ်ပူပန်အုပ်စုများကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသာ, ခဏဤကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ကိုရပ်တန့်။
သူတို့အပျိုဖော်ဝင်ဝင်တိုက်မတိုင်မီလေးတွေ hooking မှာရည်မှန်းထားတဲ့ပေါ့ပ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ဝင်တိုးခြင်းနှင့်စပါးကိုကြိတ်အနည်းငယ်သာမိန်းကလေးငယ်များသင်ပေးတယ်။ ငါ prude ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါယောက်ျားလေးတစ်ဦး 10 နှစ်အရွယ်ရိုင်းစိုင်းကောင်လေးအပေါ် Come "Rihanna ဟာ dominatrix တူသော prowls နှင့်သီဆိုရသောဗွီဒီယိုတစ်ခုထဲတွင်ရွေ့လျားကူးယူခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်မေးခြင်းအဘို့အတယောက်ကိုခေါ်ပြီ, သင်ရနိုင် ကတက်? ရိုင်းစိုင်းကောင်လေးအပေါ်လာကြ, ကောင်လေး, သငျသညျအလုံအလောက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်? "
နောက်ပြန်အလုပ်လုပ်ကိုင်, Rihanna သူ၏ဗီဒီယိုများထိရောက်စွာလိင်ကျေးကျွန်အဖြစ်အမြိုးသမီးမြားကိုပွအချို့အထီးဟစ်ဟော့ကြယ်အသုံးပြုသောပိုမိုလွန်ကဲပုံရိပ် inverting ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, အလှည့်၌, YouTube ကို၏တုပပေါ်တွင်သာကလစ်ပျောက်သောအရာအမာခံ porn အတွက်အပြုအမူတစ်ခုပွတ်ဗားရှင်းကိုဆက်ကပ်။
ဒါဟာ paywall နောက်ကွယ်မှဝှက်ထားမ, ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ပင်ကစောင့်ကြည့်ဖို့ 18 ဖြစ်ဆိုကြသည်မှမရှိကြပါဘူး။ ဒါကကျွန်တော်ကျွန်မကောင်လေးတစ်ယောက်အခါအပေါ်ကိုငါတို့လက်ရနိုင်သမျှသောသော newsagent ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, ပေါ် cheesy porn မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့သားသမီးယခုဒီတော့အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါသည်အဆိုပါအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ပစ္စည်းပစ္စယတစ်ခုနစ်ဆယ် porn ကြယ်ပွင့်မျက်နှာလုပ်လိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ထပစ်။
ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရပုံမှန်ကဘာလဲဆိုတာ၏နားလည်မှုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မနှစ်က TES များအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူဆရာ, ဆရာမများ၏လေးပုံသုံးပုံသူတို့ porn မှဝင်ရောက်ခွင့်ကျောင်းသားတစ်ဦး "ထိခိုက်သက်ရောက်မှု" ရှိခြင်းခံခဲ့ရယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အခြို့သောကျောင်းသား "porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲအိပ်မရနိုင်ခြင်း" ဟုပြောသည်စဉ်မိန်းကလေးငယ်များ "ငွေပလပ်စတစ်အရုပ်" ကဲ့သို့ဆေးထည့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
သို့သော်အမာခံညစ်ညမ်းအချို့သောကလေးများ "သာမန်" အဖြစ်မြင်သောကြောင့်အမြားအဖြစ်လာသည်ကြောင်းစိတ်ပျက်စရာသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ 2010 အတွက်ရှေ့ဆောင် NSPCC လေ့လာမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ် porn ကိုကြည့်အဆင်မပြေမှု၏လက္ခဏာသက်သေအဖြစ်ယောက်ျားလေးများမြင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာမဟုတ်ဘဲစောင့်ကြည့်မယ်လို့ - နှင့်ဖြန့်ဝေ - အိမ်တွင်းလုပ် porn ရိုက်ချက်များဖုန်းများပေါ်တွင်သူတို့သိတယ်မိန်းကလေးများအတူ။
ဒါဟာ sexting လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း, စာသား, စမတ်ဖုန်းနှင့် social networking site များသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ၏လဲလှယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Chevonea Kendall-Bryan ကတစ်သားကောင်ကြီးနှင့်ပိုမိုဆိုးရွား။ သူမသည်တစ်ဦး coroner ယခုလအစောပိုင်းကကျွန်တော်ကြားလျှင်, 11 ၏အသက်အရွယ်ကတည်းကယောက်ျားလေးများအားအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ 13 မှာသူမတစ်ဦးပါတီနောက်မှာ 18 နှစ်အရွယ်အပေါ်တစ်ဦးလိင်အပြုအမူလုပ်ဆောင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ 15 ၏တစ်ဦးကယောက်ျားလေးအကြာတွင်တူညီကုသမှုတောင်းဆို - သို့မဟုတ်သူသူမ၏တောင်ဘက်လန်ဒန်အိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်တပ်များလိမ့်မယ်။ သူမနာခံခဲ့လျှင်, မိမိဖုန်းပေါ်မှာသူမ၏ရိုက်ကူးနှင့်သူမ၏ကျောင်းမှပတ်လည်ကလစ် shared ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားမိန်းကလေးငယ်များ, သတ်သေ, Self-အန္တရာယ်စဉ်းစားပုံမမှန်မစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် sexting ကိုသာအများဆုံးပူပအတွင်းစိတ်-မြို့ကျောင်းများတွင်ဖြစ်ပျက်သနည်း? အဘယ်သူမျှမ, Cornwall, Somerset နှင့် Devon ကသူ့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုဦးဆောင်သူကို Plymouth University ၏ပါမောက္ခအန်ဒီ Phippen ဆိုပါတယ်။ "ငါသည်ကျောင်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုသို့ရောက်ခဲ့ဖူး - အတွင်းမြို့, ကျေးလက်ဒေသများနှင့် Semi-ကျေးလက်အပါအဝင် - ငါ sexting ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ဘယ်မှာတစ်ခုတည်းတဦးတည်းသတိရမရဘူး" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒါဟာဖြစ်စေမယ့်လူတန်းစားအရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအထက်တန်းလွှာကျောင်းများသို့သွားရောက်, ထိုအရပ်ကလေးတွေနည်းတူအများကြီးကအကြောင်းပြောဆိုပါ။ "
သူတို့ကဖြတ်ပြီးလာဖူးဘူးအပြင်းအထန်တောင်းဆိုလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့ကလေးငယ်များအမှန်တရားပြောပြစေခြင်းငှါပြောပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်တို့နေရာပေါ် မူတည်. ကျောင်းသားရာခိုင်နှုန်း 15 မှ 40 ထံမှထိုထိခိုက်အကွာအဝေး၏ခန့်မှန်းချက်။ ငါကို Claire ပယ်ရီနှင့်စကားပြောဆိုသောအခါနှင့်အညီ, သူမဝန်ခံသည်: "အဖြေကျွန်တော်မသိရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ငါကကြီးထွားလာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အသိပင်တိုင်းပြည်များ၏ nicest, leafiest အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီကလေးတွေလုပ်နေတာကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းထွက်မတှေ့ခဲ့? "ဟုတ်တယ်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်ပျက်ကြောင်းကောင်းသောသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အနိုင်ကျင့်စဉ်အမြဲနေရာအရပ်ယူထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများစောင့်ကြည့်မျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူကျြဆနျရှိပါတယ်တဲ့အာကာသပေးပြီဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ငါသည်ဤတနင်္ဂနွေခက်ခဲစကားစမြည်အများကြီးရှိပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်သည်။ "
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကျော်, သူမမိဘများကမိမိတို့၏သားသမီးများရဲ့စာသားများနှင့်အီးမေးလ်များကိုဖတ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုပြီးနောက်တစ် snooper ဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သင့်ကလေးသင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးခဲ့သည်ထင်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူထွက်ခဲ့သည်ဆိုပါက "သင်ကြားဝင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ခံစားရလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းကမ္ဘာကြီးထဲမှာလုပ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်မခံစားရဘူး။ ကျနော်တို့နောက်ကျောခြေလျင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုရက်သတ္တပတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမိဘများဤသို့ပြုနိုင်တော့မည်ချင်ကြဘူးကြောင်းပြသထားတယ်ထင်ပါတယ်။ "
သူမ၏ပထမဆုံးအလုပ်မှာအင်တာနက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမစ္စတာကင်မရွန်သည်အိမ်တွင်းကွန်ပျူတာများမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်“ opt-in” စနစ်ကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ယခုမူကားထိုအကြံအစည်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကလူအများစုကအလွန်ဆိုးရွားလှသည်ဟုထင်ကြသည်ဟုမစ္စပယ်ရီဝန်ခံသည်။ သို့သော်သူမသည်အများပြည်သူသုံး Wi-Fi တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ပင်ခြင်းအပါအဝင်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အပြောင်းအလဲများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ အိမ်တွင်ဖောက်သည်များက၎င်းတို့သည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုရယူလိုသည်၊ သို့မဟုတ်အခြားကန့်သတ်ချက်များသည်အတည်ပြုရန်လိုသည်။ '' ငါအဲဒီ filter ကိုမလိုချင်ဘူး '' သင်ပြောရမယ်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပြီးသည်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကလေးသူငယ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုလိမ့်မည်။ ”
က sexting အကြောင်းအရာကိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ မှလွဲ. ကောင်းပါတယ်အားလုံးသော။ သူတို့လိုလျှင်မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်, ငါ့ 15 နှစ်အရွယ်တူသောနည်းပညာအပါးရည်နပ်ရည်ယောက်ျားလေးများကပတ်ပတ်လည်နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူလိင်ဆက်ဆံလူများ၏ရုပ်ပုံများကိုထွက်ရှာကြလိမ့်မည်။ ယောက်ျားလေးများလုပ်ပါ။ ငါသူကြိုးစားပါတယ်ဘယ်အချိန်မဆိုကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်အမာခံ၏ဆူနာမီများ၏သက်ရောက်မှု့ကြောက်မိပါတယ်။ ကို Claire ပယ်ရီကပြောပါတယ်အဖြစ်: "Porn တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်မိမိတို့သတင်းအချက်အလက်ရတဲ့ရပါမည်သည့်နေရာတွင်မဖြစ်၏။ "
သူ့နှမကငါကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်။ သူတို့ကိုငါအချစ်ဇာတ်လမ်းယောက်ျားလေးမိန်းကလေး, ယောက်ျားလေးကသူ၏လိင်အင်္ဂါ၏ရုပ်ပုံပို့ပေးတွေ့ဆုံဆိုလိုတာကတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျချင်ကြဘူး။ လီလီနှင့်နှင်းဆီလမ်းဖြင့်, ၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောအမည်များမရှိကြပေ။ ငါသည်သူတို့၏အတွက်ရေးဆွဲလျက်ရှိကိုကြောက်။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ကဖြစ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်အဆင်မပြေစကားပြောရန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပေါ့။
အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ကျနော်တို့ကိုလည်းအပြစ်တင်တည်ရှိသည်ဘယ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ငါမိန်းကလေးဖက်ဖို့အိမ်ပြန်ခရီးအဖြစ်၏သတိပေးနှင့်စာသားမိသားစုတစ်ခု 14 နှစ်အရွယ်မိတ်ဆွေတစ်ကနေရောက်ရှိတာပါ။ သူမအောက်မှာရဲ့ဖိအားအကြောင်းပြောဆိုရန်အခေါ်ဆိုခကိုတုံ့ပြန်ရန်သူမက texts: "ကလေးတွေ Bash မ။ ကျနော်တို့ porn ရောင်းကြဘူး။ စိုက်ပျိုး-ups လုပ်ပါ။ သင်အိုင်တီ fix !!!! "
By ကိုးလ် Moreton
7: 30AM ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် 27 ဇန်နဝါရီ 2013